Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Grenada » Grenada Underwater Sculpture Park waxay dhamaystirtay dayactir
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • dhaqanka • Wararka Dowladda • Wararka Grenada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Grenada Underwater Sculpture Park waxay dhamaystirtay dayactir.
Rakibaadda waxaa ka mid ah 82 farshaxan oo cabbir-nololeedka ah oo ka tarjumaya dhaqanka Grenada oo laga soo farsameeyay warbaahinno kala duwan, laakiin inta badan laga soo sameeyay substrates fudud oo ay ku jiraan shubka. Waxay abuuraan substrate ku habboon, xoogaa go'an oo joogto ah, kaas oo nolosha badda laga yaabo inay horumarto.
Beerta farshaxanimada ee Grenada Underwater waxaa la furay 2006 waxayna ahayd tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee adduunka.
Beerta waxaa hamiyeeyay sawir-qaade Ingiriis ah Jason deCaires Taylor waana la heli karaa labada snorkelers iyo quusayaasha.
Beerta farshaxan ee Grenada Underwater Sculpture Park waa hanti qaran dayactirkeeduna wuxuu muhiim u yahay ilaalinta soo jiidashada saafiga ah ee biyaha Grenada.
Maamulka Dalxiiska Grenada (GTA) ayaa maanta ku dhawaaqay in mashruuca dib u cusboonaysiinta Beerta farshaxanimada ee Grenada Underwater (USP), oo ku taal meel ka baxsan Xeebta Galbeed ee Grenada ee Aagga Ilaalada ee Molinere Beauséjour, waa la dhammaystiray.
Waxaa loogu bishaareeyay inuu yahay mid ka mid ah 25-ka mucjiso ee aduunka ugu sarreeya by National Geographic, beerta waxaa saadaaliyay sawir-qaade Ingiriis ah Jason deCaires Taylor waxaana heli kara snorkelers iyo quusayaasha labadaba. The Beerta farshaxanimada ee Grenada Underwater waxaa la furay 2006-dii, waana tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee adduunka. Waxa ay noqotay mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay.
Rakibaadda waxaa ka mid ah 82 farshaxan oo cabbirka nolosha ah oo ka tarjumaya Grenada dhaqankeeda waxaana laga soo naqshadeeyay noocyo kala duwan oo warbaahin ah laakiin inta badan laga soo bilaabo substrates fudud oo ay ku jiraan shubka. Waxay abuuraan substrate ku habboon, xoogaa go'an oo joogto ah, kaas oo nolosha badda laga yaabo inay horumarto.
Mid ka mid ah farshaxannada ugu caansan beerta waa Vicissitudes, goobaabin ka kooban 28 tirooyinka laga soo tuuray carruurta Grenadian ee maxalliga ah oo ku xidhan gacmaha is haysta. Qaybaha kale ee xusidda mudan waxaa ka mid ah "Wariye Lumay," oo ah nin ka shaqeeya makiinadaha wax lagu qoro ee miiska lagu daboolay jarista wargeysyada taariikhiga ah; "Sienna," farshaxan xarrago leh oo muujinaya sawirka quruxda badan ee maqaar da'yar oo ka soo jeeda sheeko maxalli ah oo aad loo jecel yahay; iyo "TAMCC Wajiyada," wajiyo taxana oo nolosha la mid ah oo u muuqda inay u qaabaysan yihiin dillaaca dhagax weyn oo shacaab ah kaas oo ay ku lug lahaayeen ardayda kuliyada bulshada deegaanka.
Muddo ka dib, beerta farshaxanka waxaa saameeyay ciidamada deegaanka ee dabiiciga ah. Haddaba si loo ilaaliyo daacadnimadeeda, dadaallada dib u soo celinta ayaa la bilaabay si loo ilaaliyo ku habboonaanta deegaanka iyo ka qayb qaadashada nolosha ballaaran ee badda ee ay keento. Dadaalladani waxay ku kala duwanaayeen hagaajinta iyo nadiifinta dhismayaal gaar ah ilaa ka saarista iyo rarid kuwa kale.
"The Beerta farshaxanimada ee Grenada Underwater waa hanti qaran, dayactirkeeduna waxa uu muhiim u yahay ilaalinta xamaasada saafiga ah Grenada"Biyaha," ayuu yiri Petra Roach, maamulaha guud, Maamulka Dalxiiska Grenada. "Si cusub oo loogu talagalay in ay u dhaqmaan sida reef macmal ah, beerta ayaa soo jiidatay noocyo kala duwan oo nolosha badda ah oo kala duwan ilaa aagga tan iyo markii la rakibay oo ay siisay dusha sare ee coral si ay u koraan - taas oo ugu dambeyntii muhiim u ah dadaalkayaga ilaalinta joogtada ah iyo ballanqaadka lagula dagaalamayo burburka kulaylka caalamiga ah. Haddaanu nahay Maamulka Dalxiiska Grenada waxaanu sii wadi doonaa u doodista iyo taageerista mashaariicdan si loo hubiyo in meesha loo socdo ay jiri karto iyo dadaal waara.”